Kinde Oasis ga - ekwekọ na Audible na mmelite na - esote | Akụkọ akụrụngwa
Amazon, ekele maka ụdị Kindle dị iche iche dị na ahịa, na mgbakwunye na katalọgụ kasịnụ maka ụdị ngwaọrụ a, abụrụla ntụnye aka n'ụwa niile maka onye ọrụ ọ bụla nwere ebumnuche ịmalite ịgụ akwụkwọ na usoro dijitalụ. Oasis Kindle bụ otu n'ime e-agụ akwụkwọ anyị nwere ike ịchọta n'ahịa na nke ahụ emelitere n'oge na-adịbeghị anya inweta nguzogide mmiri na mgbakwunye na ihuenyo ọhụụ ebe ị ga-agụ akwụkwọ kachasị amasị anyị. Mana ọ dị ka ozi ọma na ngwaọrụ a anaghị akwụsị ebe a, ebe ụlọ ọrụ Jeff Bezos kwupụtara na ọ ga-ewepụta mmelite n'oge na-adịghị anya ka ụdị a dakọtara na akwụkwọ ọdịyo Audible.
Audible bu nke kachasi n’ime ulo akwukwo ndi odiyo ma nwekwaa nke Amazon, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ịmegharị ngwaọrụ na ụlọ ọrụ mpụga nke Jeff Bezos anaghị emeri. Mmelite a ga-abata na ọnwa ndị na-abịanụ mana n'oge ụlọ ọrụ ahụ akọwapụtaghị mgbe. Mana n'ezie, Kindle Oasis enweghị ndị na-ekwu okwu ma ọ bụ ụda isi okwu, yabụ ọ ga-adị mkpa ijikọ ngwaọrụ ahụ na ikuku Bluetooth bluetooth ma ọ bụ ekweisi.
Maka ugbu a na inddị Akwụkwọ Akwụkwọ na Kindle Voyage, o yiri ka a kpọghị ha na nnọkọ Amazon na Audible, ya mere ha ga-anọgide na-abụ ngwaọrụ ntinye dị ọnụ ala nke Amazon na-enye ndị ọrụ ahụ niile chọrọ ịmalite ịnụ ụtọ ink kọmputa na ngwa ọrụ nke ngwaọrụ ndị a na-enye anyị. O nwere ike ịbụ na n'ọdịnihu dị anya ma ọ bụ na mmelite n'ọdịnihu nke ụdị ndị a, ọrụ a nwere ike ịbata, mana ugbu a, na ọkwa Amazon, ekwughi okwu banyere ohere a, yabụ na mbụ, anyị nwere ike ịchịkwa ha pụọ akụkụ ma ọ bụrụ na anyị nwere mmasị na akwụkwọ ọdịyo.
Ejiri Kindle Oasis na 249,99 euro maka ụdị 8 GB na njikọ Wi-Fi na euro 279,99 maka ụdị 32 GB, yana njikọ Wi-Fi. Uzo abuo a, nke kwekorita ohuru ohuru nke uzo a natara, Ha ga-esi n’ahịa ahụ malite n’Ọktoba 31.
Zuta ihe omuma ndi ozo nke Oasis
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Kinde Oasis ga-adaba na Audible na mmelite na-esote
Fujifilm Instax Share SP-3, onye nbipute edepụtara maka Instagram